Prof. Ismaaciil Buubaa Oo Somaliland ku tilmaamay Gooni Goosato | Marsa News
Prof. Ismaaciil Buubaa Oo Somaliland ku tilmaamay Gooni Goosato
June 23, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Siyaasi Ismaaciil Hure Buubaa ka tirsan masuuliyiinta sare ee Xisbiga mucaaridka ah ee Waddani, ayaa qoraal uu soo dhigey bartiisa twitter -ka ku tilmaamay Jamhuuriyada Somaliland iyo Shacbigeeda kuwo gooni goosato ah.
Waxaanu intaasi ku daray inuu aaminsan yahay isku darka labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya oo lagu saleeyo nidaam Federashan ah ( two States federation sysytem), taasi oo uu sheegay in ay tahay ta lagu suulin karo gooni isku taaga Somaliland.
Mr. Buubaa waxa kale oo uu qoraalkiisa ku sheegay in loo bixiyo Jamhuuriyda Isku-taga Soomaalida, dalkaasi.
Prof. Buubaa oo dhawr sanno ka hor Somaliland dib ugu soo laabtey, ka dib markii uu cafis soo weydiistey Madaxweynihii hore ee Somaliland Siilaanyo, inkasta oo uu muddo dheer aaminsanaa fikirka aan ku maamule ee Siyaasiyiinta Soomaaliya inta badan aaminsan yihiin, kaasi oo ah kii burburiyey Jamhuuriyadii Soomaalida ee Somali Republic, ayaa u muuqday mid ka toobad keenay fikrirkaasi, waxaanu inta danbe ka tirsanaa masuuliyiinta sar sare ee xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani.
Hadalkiisana waxa uu ku soo beegmay xilli weftigii Somaliland ee ka qayb galay shirkii Jabuuti ay guulweyn kasoo hooyeen halkaasi, isla markaana shacbiga Somaliland muxaafid iyo mucaaridba si mideysan u taageereen Weftigaasi Madaxweyne Biixi hogaaminayay ee ka qayb galay si balaadhana loogu soo dhaweeyey markii ay dalka dib ugu soo laabteen.
Haddaba waxay u muuqataa inay Prof Buubaaba qalbi jab ku keentey guushii ay Somaliland kasoo hoysey Shirkii Jabuuti oo uu qarsan kari waayey fikirkii calooshiisa ku jirey, sidaa daraadeedna uu rabbo inuu niyadda kor ugu qaado dowladda Farmaajo.
Dhinaca kalena waxa la filayaa inay Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani warcad kasoo saaro masuulkaasi sare ee ka tirsan xisbigaasi ee sida badheedhka ah ugu dhawaaqay fikirkan kasoo horjeeda qaranimada iyo jiritaanka madax-banaanida Somaliland, taasi oo ka hor imanaysa dastoorka qaranka iyo kan Xisbiga waddaniba.